ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်မှုဆိုင်ရာ xHamster အစီရင်ခံစာ၊ အပိုင်း ၁ - လိင်ကွဲ (1) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်, အပိုင်း 1 အပေါ် XHamster အစီရင်ခံစာ
ပထမတော့ကျနော်တို့ကဂဏန်းတွေနဲ့အမှားတစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရှိခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကနေသူတို့နထေိုငျသညျ့နရောမှ, ကြည့်ရှုအားပေးအဘယ်အရာကို porn မှ - - နံပါတ်များကိုထောက်ခံကြောင်းကျနော်တို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့အဖြေတွေကိုနဲ့ကိုက်ညီမှုကိုမြင်တော်မူ၏။
ထိုအစဉ် porn ကိုကြည့်တဲ့သူအမျိုးသမီးများ, ဒါအဖြစ်ကောင်းစွာဖော်ထုတ်လေ့လာမှုမှာယောက်ျားနီးပါးတညျပဉ်စမယောက်ျားအဖြစ်ရိုးရိုးဖော်ထုတ်ရန်အဖြစ်ထက်ပိုမိုနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့ကြခြင်းထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားနံပါတ်များကိုဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်ဉာဏ်အလင်းစည်းအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုစဉျးစားကွညျ့လိုနေချိန်မှာအခုတော့ကျနော်တို့ကအထူးသဖြင့် bi site ကို, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းနေတဲ့လိင်တူချစ်သူတဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်လိင်ကွဲအကြောင်းအရာနှင့်ကိုယ့် (အထကျ) ပျမ်းမျှအားပြွန် site ကိုပါပဲ။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကြောင်းဆက်စပ်မှု causation မဟုတ်ပါဘူးအလေးပေးသင့်တယ်။ ရိုးရိုးနှင့်လိင်တူချစ်သူလူဦးနှစ်ဦးစလုံး porn ၏မြင်ကွင်းပိုမိုကြိမ်နှုန်းနှင့်စောင့်ကြည့်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နိမ့်အမည်းစက်သတင်းပို့ပါ။ (နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများလည်းလက်ထပ်ရနိုင်ခြေနည်းပါးကြောင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှင်နောက်တဖန်စောင့်ကြည့်ဖို့ သာ. ကြီးမြတ်လွတ်လပ်မှုကိုရှိတယ်ဒါပေမယ့်လိမ့်မယ် - ။ ကျွန်တော်ကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်လိင်တူချစ်သူမှတ်ပုံတင်အကြားမည်သည့်သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုကိုမမွငျခဲ့ပါ။ )
တကယ်တော့လုံးကိုအုပျစုအတိုင်းအတာ၏အဖြစ်ရိုးရိုးခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့သူတွေကိုသဘောမတူဖွယ်ရှိ "Porn တစ်ဦးကျန်းမာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ရုံပြင်ပဖြစ်ပါတယ်" ဟုအဆိုပါကြေညာချက်နှင့်အတူသဘောတူရန်အများဆုံးဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်နှင့်အနိမ့်ဆုံး။ (သူတို့ကဘာသာရေးဖြစ်ဖွယ်ရှိလည်းအနည်းဆုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, porn များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိ လိင်ကွဲထက်။ )
အနီရောင်သွေးအမေရိကန်လူတို့သညျကိုသင်းကွပ်ထားပါရန်ကြံစည်မှု၏ xHamster အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား? nah ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ရိုးရိုး overlords ကြိုဆိုပါတယ်သလဲ? ဟုတ်ကဲ့! သူတို့ကပိုပြီးသည်းခံပိုမိုတိုးတက်သောနေနှင့်လိင်အပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောအလားအလာရှိသည်။ Plus အားသူတို့ကျွန်ုပ်တို့ပြုသမျှအရာအားလုံးကိုချစ်ကြတယ်။
ကျနော်တို့လာရန်ရက်ပေါင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအွန်လိုင်းလိင်အပေါ် xHamster အစီရင်ခံစာမှ ပို. ဒေတာထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအတောအတွင်းဒီမှာအများဆုံးတူသောရိုးရိုးအဘယ်အရာကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အားအမြန်လမ်းညွှန်ပဲ!